Dowladda Ingiriiska oo ku dhawaaqday in Soomaaliya laga taageero dhanka amniga. – Balcad.com Teyteyleey
Dowladda Ingiriiska oo ku dhawaaqday in Soomaaliya laga taageero dhanka amniga.
UK ayaa sheegtay in kaalin weyn ka qaadan doonto soo celinta nabadda iyo xasiloonida, iyadoo 21 milyan oo Bound ku bixin doonto sidii Hanaanka amniga dalka uu si tar tartiib ula wareegi lahaayeen Ciidamada Soomaaliya.
Dowladda Ingirrska ayaa dalka Soomaaliya horay ugu soo dirtay Tababariyaal, kuwaas oo tababari doona ciidanka Soomaaliya iyo kuwo AMISOM si ay ugu shaqeeyaan xasilinta iyo la dagaalanka kooxaha arga-gaxisada.
Amniga dalka ayaa ka mid ah ajendiyaasha ugu waa weyn oo lagu soo qaadi doono shirka 11 bisha May ee sanadkan ka furmi doona magaalada London ee dalka Ingiriiska, kaas oo ay ka qeybgali doonaan madaxda dalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo mataliyaal ka socda dalalka iyo hey’adaha taageera Soomaaliya.
Warkan qoraalka ah oo ka soo baxay dowladda UK ayaa sidoo kale lagu sheegay inay sii wadayaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan amniga, dib u qaabeynta siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta arimaha bulshada si loo xaqiijiyo dhismaha iyo horumarka ay Soomaaliya sameysay 5-tii sanno ee u dambeysay.
Dhanka kale Shirka London, ayaa sidoo kale waxaa looga hadli doonaa arimaha gargaarka oo tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin cuno, iyadoo la sameyn doono jawaab celin caalami ah oo ku aadan abaarta ka jirta dalka.
RW Khayre oo shir looga hadlayey amniga ka furay Dayniile iyo Deeq uu gaarsiiyay Dadka Tabaalaysan
Madaxweynaha Hirshabeelle oo jawaab kulul ka bixiyay amar ka soo baxay Dowladda federaalka